Testosterone Undecanoate ntụ ntụ maka bodybuilding | AASraw
Testosterone Undecanoate ntụ ntụ maka bodybuilding
/blog/testosterone Undecanoate/Testosterone Undecanoate ntụ ntụ maka bodybuilding
Ihe na 04 / 04 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na testosterone Undecanoate.
I.Raw Testosterone undecanoate ntụ ntụ ihe bụ isi Characters:
aha: testosterone Undecanoate
Molekụla Formula: C30H48O3
Ọbara arọ: 456.7
Testosterone undecanoate ntụ ntụ bụ otu n'ime ụdị ọgwụgwọ kachasị ọhụrụ maka Low T n'ime ụmụ nwoke. Nkwekọrịta ya na 2014 maka iji mee ihe na United States tinyere otu ụdị ọgwụgwọ ọzọ nke testosterone na ngwá ọrụ nke ndị dọkịta nwere na mkpịsị aka ha maka ịwelite ọkwa nke testosterone n'ọbara.
Ebu bụ testosterone undecanoate ntụ ntụ aha dị na US. Usoro nke ngwa maka ọgwụgwọ a dị iche na nke ụdị ọzọ nke injections testosterone. Ọ bụ ezie na testosterone undecanoate ntụ ntụ na-agba ọsọ ka a na-enye ya na intramuscularly n'otu ụzọ ahụ dịka ụdị ọzọ nke testosterone a na-agba ume, nke a abụghị ọgwụgwọ mmadụ nwere ike ịrụ n'ụlọ ya.
N'ihi ihe ize ndụ ndị dị elu nke a ga-ekpuchi n'akụkụ mpaghara mmetụta dị n'okpuru, testosterone undecanoate ntụ ntụ ga-edozi na ụlọ ọrụ dọkịta. A ga-enwekarị ụgwọ maka nlekọta ụlọ ọrụ a na ọtụtụ ndị dọkịta.
Ntụziaka a na-atụ aro maka ụmụ nwoke karịa afọ 18 bụ 3 ml (750 mg) site na ọgwụ intramuscular. A na-esochi otu usoro izu anọ ahụ mgbe e mesịrị. Ọgwụgwọ ga-aga n'ihu n'izu iri ọ bụla. A gaghị enye onye ọ bụla n'okpuru afọ 18 Testosterone undecanoate injections.
Olee otú iji Testosterone Undecanoate ntụ ntụ Ngwọta maka bodybuilding?
Gụọ Nduzi Ngwọta nke ọkachamara gị na-enye ọgwụ tupu ị malite iji ọgwụ a na oge ọ bụla ị nwetara ọgwụ. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, jụọ dọkịta gị ma ọ bụ onye na-ahụ maka ọgwụ.
A na-enye ọgwụ a site na ntinye n'ime muscle ahụ dịka dọkịta gwara gị. Mgbe nke mbụ, a na-enyekarị 4 izu mgbe e mesịrị, mgbe ọ bụla izu 10. Usoro ogwu a dabeere na ọnọdụ ahụike gị, testosterone ọbara, na mmeghachi omume na ọgwụgwọ.
Jiri ọgwụ a na-eme mgbe nile ka ị nweta uru kachasị na ya. Iji nyere gị aka icheta, jiri kalịnda akara ụbọchị ị ga-enweta ọgwụ.
Ntuhie ma ọ bụ mmegbu nke testosterone nwere ike ibute ọrịa ndị dị oké njọ dịka ọrịa obi (gụnyere mmetụ obi), ọrịa strok, ọrịa imeju, nsogbu uche / nsogbu ọnọdụ, omume ọjọọ na-achọpụta, ma ọ bụ uto na-ezighi ezi (na ndị na-eto eto). Emela ka ụbụrụ gị dịkwuo elu ma ọ bụ jiri ọgwụ a eme ihe mgbe niile ma ọ bụ karịa ogologo oge. Mgbe a na-emehie ma ọ bụ na-eme ihe na-egosi na ị na-emegharị ahụ, ị ​​nwere ike ịnwe mgbaàmà mwepụ (dịka ịda mbà n'obi, mgbakasị, ike ọgwụgwụ) mgbe ị na-akwụsị iji ọgwụ ahụ na mberede. Mgbaàmà ndị a nwere ike ịdịru site na izu ruo ọnwa.
Gwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ọnọdụ gị adịghị mma maọbụ ọ bụrụ na ọ dị njọ.
Kedu ihe ụfọdụ m kwesịrị ịma ma ọ bụ mee mgbe m na-ewe Testosterone Undecanoate powder Injection?
Gwa ndị niile na-ahụ maka nlekọta ahụike gị na ị na-ejiri ọgwụ ogwu undecanoate testosterone. Nke a na-agụnye ndị dọkịta gị, ndị nọọsụ, ndị na-enye ọgwụ, na ndị dọkịta.
Ọ bụrụ na ị nwere shuga ọbara oke (ọrịa shuga), ị ga-achọ ilebara ọbara shuga gị anya.
Enwere ike inwe ohere dị elu nke cancer prostate. Soro dọkịta na-ekwurịta okwu.
Ọ bụrụ na ị nwere prostate buru ibu, ihe ịrịba ama gị nwere ike njọ karịa na ị na-eji ya testosterone undecanoate ogwu. Kpọọ dọkịta gị ma ọ bụrụ na nke a emee gị.
A na-enwe ọbara mgbali elu dịka nke a. Mee ka ọbara gị dị ka onye dọkịta gwara gị.
Ọgwụgwọ na iji testosterone undecanoate ogwu nwere ike ibute cholesterol elu na triglycerides. Mmetụta nke mgbanwe ndị a na obi ike adịghị ama. Soro dọkịta na-ekwurịta okwu.
Gbalịa hụ ọrụ ọbara dịka onye dọkịta gwara gị. Soro dọkịta na-ekwurịta okwu.
Usoro ọgwụ a nwere ike ibute ohere nke nkedo ọbara, ọrịa strok, ma ọ bụ ọgụ obi. Soro dọkịta na-ekwurịta okwu.
Nke a bụ ọgwụ anabolic steroid. A na-emetọ ọgwụ ọjọọ anabolic steroid ma jiri ya eme ihe na-ezighị ezi. Anabolic steroid omume nwere ike ibute ịdabere na ajọ nsogbu ahụ ike. Nsogbu ahụike a gụnyere obi ma ọ bụ nsogbu arịa arịa ọbara, ọrịa strok, nsogbu imeju, na nsogbu uche ma ọ bụ nsogbu ọnọdụ uche. Soro dọkịta na-ekwurịta okwu.
Ọ bụrụ na ị bụ 65 ma ọ bụ karịa, jiri ọgwụ na-ejighị ọgwụ na-eme ka testosterone. Ị nwere ike inwe mmetụta ndị ọzọ.
A naghị anabata ọgwụ a maka ịgwọ nrụrụ testosterone dị ala site na ịka nká. Soro dọkịta gị kwurịta okwu.
Ọgwụ a nwere ike imetụta spam na ụmụ nwoke. Nke a nwere ike imetụta inwe ike ịzụ nwa. Soro dọkịta na-ekwurịta okwu.
A naghị anabata ọgwụ a maka iji ya mee ihe na ụmụaka. Soro dọkịta na-ekwurịta okwu.
uru nke testosterone undecanoate powder
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike iyi ka ụbụrụ testosterone undecanoate ntụle ga-aba uru dịka ọ bụla ụdị ọgwụgwọ ọ bụla ọzọ, nke a nwere ike ọ gaghị abụ mgbe niile. Akwụsịghị iji ihe ndị metụtara ihe ize ndụ kpuchie na ngalaba na-esote egbochibido ịbụ ụdị ọgwụgwọ a kachasị atụ aro maka Low T.
Ndị nwere mmasị na eji testosterone undecanoate ntụ ntụ zụrụ ya na ebe nrụọrụ weebụ na-akwadoghị na ịntanetị n'ọtụtụ ọnọdụ. Nke a nwere ike igbochi ma ọ bụ belata uru ndị metụtara ụdị ọgwụgwọ ọzọ nke testosterone dịka:
mma na-ehi ụra
Mee ka ntutu dị mma
Mgbochi na ọkpụkpụ siri ike
Ọrụ na-arụkọ ọrụ ọnụ na ebe nchekwa
Mma obi ike
Mma mmekọahụ na libido
Ebe ọ bụ na onye ọkachamara n'ịgwọ ọrịa na-agwọ ọrịa na-emepụta testosterone ga-edozi ya na ụlọ ọgwụ ma ọ bụ nhazi ụlọ ọrụ, usoro ọgwụgwọ anaghị adịkarị karịa usoro ọgwụ cypionate testosterone.
Nmetụta nke testosterone undecanoate powder
Tupu anyị enweta ụdị mmetụta ndị nwere ike ibute site na ịnweta a testosterone undecanoate usoro onunu, e nwere ịdọ aka ná ntị siri ike inye. Iji mee ihe nwere ike ime ka ihe siri ike, na nsogbu ọrịa nchịkwa nke na-akpọ microembolism mmanụ (POM). Nke a nwere ike ịgụnye ịgbatịkwu olu na akpịrị, nrịanwụ, obi mgbu, na-agba ụkwara, na syncope.
E nwekwara ịdọ aka ná ntị ọzọ maka testosterone undecanoate ntụ ntụ: USA ndị bi na ya, na ụfọdụ, kọrọ otu mmeghachi ahụ nhụsianya siri ike mgbe ha natara ọgwụ ahụ. Nke a bụ ya mere ndị ọrịa ga-eji na-echere n'ọfịs dọkịta maka 30 nkeji oge ka testosterone undecanoate ntụpụ kụrụ. A na - eji Nduzi eme ihe site na mmemme a kpachibidoro.
Mmetụta ndị ọzọ nwere ike ime mgbe ị nwetara testosterone undecanoate ntụ ntụ maka ire ere gụnyere ihe ndị a:
Elu ogo nke estrogen na ọbara
Nchegbu ma ọ bụ mmegide
Ntutu ntutu ma ọ bụ ọnwụ
Mgbanwe na njikwa na arụmọrụ
Mgbu na saịtị nke ịgba ogwu
Ihe otutu ma obu mmanu mmanu
Ọ bụ ezie na a kwadoro maka iji ya mee ihe na United States, ị ga-eji testosterone undecanoate uzuzu mee ihe ma ọ bụrụ na uru ndị dị elu karịa ihe ize ndụ nwere ike ịkpata.
Tags: zụrụ Testosterone Undecanoate ntụ ntụ, Raw Testosterone Undecanoate ntụ ntụ, Testosterone Undecanoate ntụ ntụ
Ịzụta Bupropion HCL ntụ ntụ: eji, usoro onunu ogugu, mmetụta ndi ozo Nandrolone Decanoate ntụ ntụ na Nandrolone phenylpropionate powde